Omasha Smokehouse ngezandla
Omasha Smokehouse muhle ngoba isisindo ongaphakeme, kulula ukuyiphatha, ngaphezu, kuthatha isikhala kancane phezulu. Ukudla ngosizo lokhu imishini ibhalwe ngokushesha, futhi umphumela uba okumnandi. Idivayisi ngibhema imikhiqizo intuthu okwenziwa ngaphansi lokushisa eliphezulu, ngakho-umkhiqizo namanje wabhaka. Ngenxa yalokho, it okwenzayo ukuze uthole izibiliboco namanzi futhi elimnandi ukunambitheka ngabhema.
Iinsetjenziswa Smokehouse ephathekayo
Omasha Smokehouse izindlu has a cylindrical noma unxande ukuma, okuyinto ivaliwe lid. Lesi sakamuva kungenzeka kunesikhala yentuthu. Ngaphakathi egxilile eheleni: emathileyi noma izingwegwe inhlanzi, inyama noma amafutha. Ngaphansi grilles efakwe ugqoko amafutha, kungenjalo ngeke zishe nokushintsha izinga intuthu. Uma usetha pan ngaphansi hlupha, amanoni ngeke kuwele phansi, intuthu kuzosusa kanye nemikhiqizo ngibhema izotholwa elimnandi kakhulu futhi esihlwabusayo.
Ukwenza ubuchwepheshe Smokehouse ephathekayo
Uma unquma ukusebenzisa i Smokehouse ekamu, khona-ke udinga ukukhetha impahla. Njengoba-ke ngokuvamile esetshenziselwa 1.5 mm insimbi engagqwali. Lo mklamo uzolunga akubo bazokhonza lapha iminyaka eminingana. Uma iqhathaniswa nezinhloko-Endabeni izinsimbi ayoni, lona wamuva ayengayisebenzisa ukusinda ngonyaka enkonzweni ngentshiseko.
Khetha usayizi ukuma idivayisi kufanele esekelwe izinhloso tilandzelwe. Lo mkhankaso elula Smokehouse cylindrical, angasetshenziswa futhi ngoba Ukushisa ematendeni. Omasha Smokehouse ongasetshenziselwa ukulekelela sikaphalafini igesi, okuyinto kufakwa umusi umzimba ebhakedeni. Lo mklamo uphelele namanye esake sawenza sisendleleni nokudoba.
Izincomo ukwenziwa somlilo Smokehouse ngoba amatende
umklamo okunjalo kuyoba we isilinda ngohlangothi yayo. Ubukhulu izindlu kufanele alingane 300x450 mm. Leli bhokisi zingenziwa uthayela noma ukucosha umkhiqizo osuphelile insimbi engagqwali. Ikhava kufanele ukuvala uvalwe futhi ube umgodi ipulaki.
Ngaphakathi kunjalo kukhona engeli fixed, okuyinto zitholakala kanye ukuphakama isilinda. Basuke edingekayo ukufaka epanini esikhiphekayo. Ngo isingasiyingilizi phansi egcwele sawdust. Olubekwa imikhiqizo baking, okuyinto bafakwa Smokehouse. Okwamuva ngesikhathi ukupheka makufakwe emlilweni. Ukusebenzisa isakhiwo esinjalo kungaba esengeziwe Ukushisa ematendeni. Kulokhu, esikhundleni usebenzisa sawdust namalahle omlilo. Lolu dengezi is embozwe ngesivalo, futhi imbobo - ipulaki.
Ukusebenzisa imbiza noma ibhakede
Omasha Smokehouse ngoba inhlanzi zingenziwa amabhodwe noma amabhakede. Kulokhu, uyokulungela cylindrical umzimba. Ngoba kumelwe uzilungiselele ukufaka ugqoko ezingamabhangqa nemigoqo. Kujwayele inezendlalelo eziningana. I ephansi kuyoba ngesimo Pallet, futhi isihlanganisi engenhla izokwethulwa izingwegwe ezingamabhangqa nemigoqo.
Design ayikwazi ukulungiswa odongeni, bese usetha ezansi, futhi ifaka buhambisane imilenze kule divayisi. Pallets ongakhonza isitsha insimbi engagqwali. Ubukhulu bayo kumele kube ezincane kuno ububanzi engaphakathi bezinhlamvu ngumuntu amamilimitha angu ambalwa. Ngoba ukulandisa kuphetha khulula intuthu pan akumelwe mbeni izindonga.
Uhlaka ngehele kufanele wenziwe engagqwali wire. Isimiso esifanayo wenziwa izingwegwe. Ukukhiqiza ekamu Smokehouse ngezandla zabo, isivalo kumele kulekelelwa ukulungisa, ukuqinisekisa ukuthi ungumuntu okwaziyo Ukuthokomala. Ukuze izimbobo intuthu-yamba. Uma uhlela ukusebenzisa Smokehouse efulethini, kubalulekile ukuqinisekisa ukuhoxiswa intuthu. Ngenxa yalesi kwihendisethi ephelele noma extractor enamandla, enye yazo ufakwa imbobo esivalweni.
Inketho Smokehouse ngabhema
Smokehouse izimo mkhakha bangaba buyindlela esisemqoka. Ukuze wenze lokhu, lungiselela izikhonkwane, imigoqo kanye ucezu polyethylene. Amathuba okulimala ungayithola enye ugongolo ukuze usetshenziselwe ukwakhiwa isidumbu. Ngenduku ngezingwegwe ulenga imikhiqizo ezidingekayo.
Njengoba Izinsiza eziyisisekelo Smokehouse ezinjalo kungenzeka ukuthutha amathuluzi adingekayo kanye izinto womshini imishini ebhuthini yemoto. ipayipi flue ungayithola enye by iyiphi enye efanelekayo.
Uma uzobe ekhiqizwa ekamu Smokehouse ngibhema, kubalulekile ukuthola indawo nge emthambekeni 60 °. Isikhoselo sakhe tarp futhi amagatsha, bese uwa Turf elele. Lokhu kuyoba yinto ipayipi ngokurhaba. Khona-ke phezulu ifreyimu kumele afakwe kusukela ugongolo kanye ezigxotsheni, okuyinto zihlobene kakhulu polyethylene. Ngaphakathi ukukhwezwa yokubeka ngezingwegwe noma izinduku. Khona-ke ngeke nje ukuzalela umlilo Smokehouse, umusi ageleza ngaphakathi.
Ukusebenzisa imiphongolo ngoba abandayo imishini ukubhema
Uma unquma ukwenza Smokehouse aphume umgqomo, udinga okungaphezu nje futhi anezikhala metal. Kufanele ukulungiselela ngehele nezihluthulelo, lokwela kanye burlap. Ukuze amaziko kumelwe umgodi ezansi kombhede ishidi ithini okuyilona elidingekayo ukuze umuntu iyunifomu yefilakisi chips izinkuni noma sawdust.
Ngemva kokuphela esigabeni wokulungiselela, ungenza idivayisi ngefasitele. Kuzoba umsele kokuba ububanzi okuyinto ilingana 25 cm. Ubude lingafika ku-7 m. Yobunzima Kwamanzi embozwe impahla non-ezivuthayo, ngenxa yalokhu slate ephelele, okuyinto ezigcwele inhlabathi.
Ngemva ungenza ekamelweni ukubhema. Wenziwe emgqonyeni sensimbi, okuyinto uyashiywa phansi. Ngezansi kwagcizelela anezikhala metal. Ukuze uhlunge umule kuso welula burlap. Ezansi umgqomo iqinile nehele, lemifanekiso itholakala. Enye grate sise phezulu umgqomo sihlehliswe at 20 cm kusukwa. Kuzobakhuthaza walala imikhiqizo.
Yokuhamba ngezinyawo Smokehouse ngibhema ephelele fishings nokuzijabulisa ezweni. Ukwakhiwa kungenziwa ekhiqizwa omunye ubuchwepheshe vyshepredstavlennyh. Ngezinye izikhathi ngisho Smokehouse izoso kulekelelwa. Kulokhu, umzimba izokwethulwa kusukela engagqwali ibhokisi. Ubukhulu lesilinganisiwe isakhiwo kulokhu kukhona 600x400x500 mm. I we izoso ukujula elikhulu kuyoba 200 mm.
Eshalofini Original ngoba izimbali ngezandla zakhe. Imikhandlu zokukhiqiza design
Indlela yokwenza indoda nangesigqoko yensimbi: Step by step imiyalelo
Indlela yokwenza esihlalweni aphume amabhodlela epulasitiki ngezandla zabo
Hlobo luni umsebenzi - logistician?
Paul Shuvaev: nempilo yakho kanye umsebenzi umlingisi
Kanjani bendabuko wedding izingubo emazweni ahlukahlukene
Streamers - Iyini? Tape drive: izibuyekezo, izithombe kanye intengo kudivayisi